किशोर नेपाल काठमाडौं, १८ कात्तिक
शहरका जुझारु पत्रकारहरू लेख्ने विषय नपाएर सिंहदरबारमा आगो लाग्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्टले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको घटना केलाउन थालेका छन् ।
पञ्चायतकालीन नेपालमा जो सत्तासीन भएका थिए, तिनको नैतिकता केलाएर कहीँ पुग्न सकिँदैन । त्यो जमाना एउटा जमाना थियो, जब तुलसी गिरिजस्ता पञ्च ‘महाराजले आइमाई बन भन्दा फरिया लाएर नाच्न’ तयार हुन्थे ।
यसै पनि, यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा यतिबेला लेख्ने विषयको कुनै कमी छैन । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको स्वास्थ्यका वरिपरि सबै घटनाहरू परिक्रमा गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका सिपाहीँहरूलाई बोल्ने फुर्सद छैन । प्रधानमन्त्री ओलीका आफ्नै ‘स्टाफ’ प्रवक्ताहरू कसरी स्वास्थ्यसम्बन्धी सूचना लुकाउने ? भनेर लागेका छन् ।
उनीहरू प्रधानमन्त्री ओली सामान्य स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल गएको बताइरहेका हुन्छन, उता डाक्टरहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको डायलासिसको तयारी गरिसकेका हुन्छन् । पत्रकारहरू चक्रपथ बाहिर, शहरको उत्तरी छेउमा रहेको ग्राण्डी अस्पतालबाट निस्किने हरेक मानिसलाई समातेर प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यको खबर सोधिरहेका हुन्छन् । देशका नागरिक चिन्तित छन् ।
कसरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई सञ्चो सुबिस्ता हुन्छ ? त्यसको चिन्तामा रहेका नागरिकको कमी छैन । बैतडीदेखि विन्ध्यवासिनी, पोखरा, मनकामना, गोर्खाहुँदै पाथीभरा, ताप्लेजुङसम्मका नागरिक प्रधानमन्त्री ओलीको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै स्वास्थ्यलाभका लागि देवीलाई बोका बलि चढाउने भाकल गर्दैछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई जनताले चामत्कारिक नेताका रूपमा मानेका छन् । उनले भारतलाई नाकाबन्दी फिर्तालिन बाध्य तुल्याए । त्यसपछि मोतिहारीदेखि अमलेखगन्जसम्म पेट्रोल र डिजेल पाइपबाट आउने सिष्टम बसाले । उता, चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङलाई आफ्नो देशमा आएर एकरात बासबस्न मात्रै बाध्य पारेनन्, केरुङ र काठमाडौंलाई जोड्ने रेलमार्ग बनाउन प्रतिवद्ध तुल्याए ।
सी भन्दै थिए, ‘हामीले केरुङसम्म रेल ल्याउनै सकेका छैनौं । रेलको लिक सिगात्सेमा नै छ । पहिले रेल केरुङ आउन त दिनोस्, त्यसपछि काठमाडौंको कुरा सोचौंला । केरुङबाट काठमाडौंसम्म रेल लैजान सजिलो छैन ।’
भौगोलिक मात्र होइन, भौगर्भिक जटिलता थुप्रै छन् । तैपनि, तपाईंको आग्रहमा यसको प्रारम्भिक काम गराउन मेरो सहमति भयो । अहिले रेल नआउने हो भने मोटर नै सही । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्ताव थियो, ‘रेल नआउँदासम्मको स्थितिलाई सुविधाजनक बनाउन चीनले टोखादेखि केरुङसम्म सुरुङसमेतको मोटर बाटो बनाइदेओस् ।’
ओलीका अनुयायीहरू, मित्रहरू र आफन्तहरू आफ्नो मिर्गौला हातहातमा लिएर दान दिन तयार बसेका छन्
सीले प्रस्तावमा लालमोहर जडी दिए । यसरी भारत चीन दुवैबाट फटाफट काम गराउन सक्ने दिव्यपुरुष नेपाली जनताले देखेका थिएनन् ।
डाक्टरहरूको सल्लाहमा प्रधानमन्त्री ओलीको हालको बिरामी मिर्गौलाको सट्टा अर्को मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिने निर्णय भयो भने देशमा मिर्गौलाको कुनै अभाव हुनेछैन । देशभरि छरिएर रहेका प्रधानमन्त्री ओलीका अनुयायीहरू, मित्रहरू र आफन्तहरू आफ्नो मिर्गौला हातहातमा लिएर दान दिन तयार बसेका छन् ।
तर, चिकित्सकहरू प्रधानमन्त्री ओलीको उमेरका कारण प्रत्यारोपणका मामिलामा अलिकति डराएकाछन् । हो नि, प्रत्यारोपणगर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको ज्यानले नयाँ मिर्गौला ‘रिजेक्ट’ ग¥यो भने ? समस्या अर्को पनि छ । प्रधानमन्त्री ओली जस्तो दह«ो र आत्मविश्वासी व्यक्तिको शरीरमा जस्तो पायो त्यस्तो मिर्गौला फिटहुने कुरा आएन ।
अर्कोतिर, रगतमा रहने ‘क्रियाटिनिन’ भन्ने महत्त्वपूर्ण तत्त्व प्रधानमन्त्री ओलीको शरीरमा प्रवाहित रगतमा बढेको बढेकैछ । त्यसले कमहुने सुरसार कसेको छैन भन्ने पनि उपचारमा खटिएका डाक्टरहरूलाई जानकारी छ । प्रधानमन्त्री ओलीको डायलासिस कि प्रत्यारोपणको अवस्था ‘पचास–पचास’ कै छ ।
अहिले डायलासिस र मिर्गौला प्रत्यारोपणमध्ये कुन उत्तम भन्ने निर्णय भइसकेको छैन । माथि पनि उल्लेख भइसकेको छ, यो निर्णय ५०÷५० प्रतिशतमा अड्किएकोछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको गजबको आत्मविश्वासका कारण उहाँका लागि डायलासिस उत्तम उपचार हो भन्ने एकथरी डाक्टर छन् भने अर्काथरी डाक्टर प्रधानमन्त्री ओलीको त्यही ‘गजबको आत्मविश्वास’ का आधारमा मिर्गौला प्रत्यारोपणको पक्षमा सुझाव दिइरहेछन् ।
वीर अस्पतालमा थन्किएका १८ वटा डायलासिस मेसिनमध्ये कुनै एक ल्याएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जडान गरे भइहाल्यो
मिर्गौला प्रत्यारोपणका पक्षमा बोल्ने डाक्टरहरू भन्छन्, प्रधानमन्त्री ओलीको शरीर हाजमोला पाचकजस्तै हो । त्यो शरीरले जे पाउँछ, त्यो मज्जाले पचाउँछ । यी दुई सुझावमा प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा कुनै एकको चयन नै निर्णयको प्रमुख आधार हुनेछ ।
अहिले प्रधानमन्त्रीको निवास, बालुवाटारमा डायलासिस मेसिन जडानगर्ने प्रबन्ध मिलाउन कर्मचारीहरू सक्रियताका साथ लागेका छन्। यद्यपि, डायलासिस मेसिन जडान गर्ने र नगर्ने कुराको यकिन निर्णय भएको छैन । तर, देशमा डायलासिसगर्ने मेसिनको कुनै अभाव छैन ।
वीर अस्पतालमा थन्किएका १८ वटा डायलासिस मेसिनमध्ये कुनै एक ल्याएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जडान गरे भइहाल्यो । तर समस्या अडकिएको छ डायलासिस कि प्रत्यारोपणमा । यो निर्णय जसको उपचारको निमित्त यो मेसिन जडान गरिने हो, उनैले मात्र गर्न सक्दछन् ।
प्रधानमन्त्री ओली बिरामी छैनन् । भन्छन्, खाली मिर्गौलाले बिथोलेको हो । त्यो ठीक भइहाल्छ । उनको मिर्गौलामात्र खराब हो । बाँकी सबै ठीक छ । प्रधानमन्त्रीले सधैं ठीक कुरा गर्दछन् भन्ने गलत हो । प्रधानमन्त्री बिरामी छन् । उनी यो बिमारी देखाउन चाहँदैनन् ।
आइतबारको दिनमात्रै उनले धेरै काम गरे । एक्सरे गराउन अस्पताल पुगे । पार्टी सचिवालयको बैठक डाके । क्याबिनेट बोलाए । सातजना गभर्नर (प्रदेश प्रमुख) लाई जागीरबाट निकाले । त्यसका लागि आबश्यक सिफारिश लिएर आफैं राष्ट्रपति कहाँ पुगे ।
अरूको हातमा पठाए ढिलो हुन्छ । यतिबेला प्रधानमन्त्री ओली हतारमा छन् । उनी देश र जनताका खातिर गर्नुपर्ने निर्णयगर्न एकमिनेट पनि ढिलोगर्न चाहँदैनन् । यो सबैले मनन गर्नुपर्ने कुरा हो । कसैले मननगर्न चाहँदैन भने पनि कसैले केहीगर्न सक्दैन ।
शहरका जुझारु पत्रकारहरूले प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यबारे अण्टसण्ट लेखेर प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई मात्रै होइन, पूरै नेपाललाई ठूलो तनाव दिएका छन् । मूलधारका भनिने समाचारपत्रहरूले कसैको पनि प्रतिष्ठाराख्न, कसैको पनि सम्मानगर्न जानेका छैनन् भने अब यी अनलाइनहरूको त के कुरा भो र ?
उता, प्रमुख प्रतिपक्षका नेता शेरबहादुर देउवाको भनाइ छः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले सरकार चलाउन बहुमत दिएको हो, सत्ता चलाउन होइन । यसको अर्थ के भयो ? नेपालका नागरिकले नै खोज्नु र भन्नुपर्ला ।
अहिलेका लागि एउटै प्रश्न छ– प्रधानमन्त्री ओलीको शरीरमा जडित मिर्गौलाको नियमित डायलासिस कि जडित मिर्गौलाको ठाउँमा नयाँ मिर्गौलाको प्रत्यारोपण ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, कात्तिक १८, २०७६, १६:५३:००